Ungayiphucula njani iRhafu yokuGuqulwa kweselfowni ngeeWallet zedijithali | Martech Zone
Amanqanaba okuguqula iselfowuni abonisa ipesenti yabantu abakhethe ukusebenzisa i-app yakho yeselfowuni / iwebhusayithi elungiselelwe iselfowuni, ngaphandle kwenani labo banikwa. Eli nani liza kukuxelela ulunge kangakanani umkhankaso wakho weselfowuni kwaye, kuthathelwa ingqalelo iinkcukacha, yintoni ekufuneka iphuculwe.
Baninzi ngenye indlela urhwebo olunempumelelo abathengisi babona i-plummet yabo yenzuzo xa isiza kubasebenzisi beselfowuni. Inqanaba lokulahlwa kwenqwelo yokuthenga liphezulu ngokuhlekisayo kwiiwebhusayithi ezihambayo, kwaye ke ukuba unethamsanqa lokufumana abantu ukuba bajonge ngesithembiso sokuqala.
Kodwa inokwenzeka njani le nto, xa inani labathengi abahambahambayo likhula ngamashumi ezigidi minyaka le?
Izixhobo zefowuni ziye zavela kude neenjongo zazo zokuqala. Ukuba sinyanisekile, iifowuni kunye neetekisi ayingomsebenzi ophambili kwizixhobo ezifanelekileyo kubemi abaninzi ngakumbi. Isixhobo esiphathwayo sibe lulwandiso lomntu wanamhlanje kwaye sisebenza phantse kuzo zonke iinjongo ezinokuthenjwa, ukusuka kunobhala ongenamandla ukuya kwinqwelo yokuthenga kwi-Intanethi.
Kungenxa yoko le nto ukubona iselfowuni njengenye nje into engonelanga kungonelanga. Iiapps, iisayithi kunye neendlela zokuhlawula kufuneka zihlengahlengiswe kwaye ziphinde zibuyiselwe ezi zixhobo ngokukodwa. Enye yeendlela eziguqukayo zokwenza intengiselwano ephathekayo kukulawulwa kwemali ye-ewallet, esingumxholo weli nqaku.
Ukuphucula iiRhafu zokuGuqulwa kweselfowuni
Okokuqala, masicacise into ibenye. Urhwebo ngeselula luyathatha indawo ilizwe le-e-commerce ngokukhawuleza okukhulu kakhulu. Kwiminyaka nje emihlanu yabona umyinge ophantse waba ngama-65%, ngoku ophethe i-70% ye-e-commerce iyonke. Ukuthenga ngeselula kulapha ukuze uhlale kwaye uthathe indawo yentengiso.
Okothusayo kukuba, ukulahlwa kwenqwelo yokuthenga kusephezulu kakhulu kwiiwebhusayithi ezihambayo kunakwimxholo ofanayo ojongwa kwiikhompyuter zedesktop. Le yingxaki enkulu kuye wonke umntu, ngakumbi abathengisi abancinci kunye neenkampani ezintsha kutshintsho. Kutheni le nto isenzeka?
Okokuqala, kukho okucacileyo. IiWebhusayithi zeSelfowuni zihlala zingenzi kakuhle, kwaye kunesizathu esivakalayo. Zininzi izixhobo, ubukhulu, izikhangeli, kunye neenkqubo ezisebenzayo ezenza ukuba iwebhusayithi efanelekileyo yeselfowuni ifune isixa esikhulu semithombo kunye nexesha.
Ukukhangela kunye nokuhambahamba kwiwebhusayithi ephathekayo, enamashumi okanye amakhulu ezinto zokuthenga kuyadina kwaye kuyaphazamisa. Nokuba umthengi unenkani ngokwaneleyo ukuba angaya kuyo yonke loo nto kwaye aqhubeke nokuphuma, ababaninzi abanemithambo-luvo yokungena kwinkqubo yokubhatala.
Kukho isisombululo esihle ngakumbi. Inokuba ibiza kakhulu ekuqaleni, kodwa ngokuqinisekileyo ihlawula ngokukhawuleza okukhulu. Iiapps sisisombululo esingcono kakhulu sezixhobo eziphathwayo. Zenziwe ngokukodwa ngenjongo yokusetyenziswa kweselfowuni kwaye zinomdla ongaphaya kokujonga. Kwaye, njengoko sibona, ii -apps zeselfowuni zinenqanaba eliphantsi kakhulu lokulahla inqwelo yokuthenga kunazo zombini iidesktop kunye neewebhusayithi ezihambayo.
Abathengisi abathe batshintsha kwiiwebhusayithi eziselfowuni besiya kwiiapps babone ukwanda okukhulu kwingeniso. Ukujongwa kwemveliso kukhuphuke ngama-30%, izinto zongezwa kwinqwelo yokuthenga inyuke nge-85% kwaye ukuthengwa ngokubanzi kunyuke nge-25%. Ukubeka ngokulula, amaqondo okuguqula angcono ngokusebenzisa ii -apps zeselfowuni.
Yintoni ebangela ukuba iiapps zibe nomtsalane kubasebenzisi yindlela enomdla yokuhamba, kuba, ngapha koko, zenzelwe izixhobo eziphathwayo. Uvavanyo olusuka kwi-2018 lubonise ukuba uninzi lwabathengi luxabisile ukulungelwa kunye nesantya, kunye nokubanakho kokusebenzisa unqakrazo olunye lokuthenga ngee-wallet kunye namakhadi etyala agciniweyo.
Ubuhle bezipaji zedijithali kukulula kwazo kunye nokhuseleko olwakhiwe ngaphakathi. Xa intengiselwano yenziwa kusetyenziswa isipaji sedijithali, akukho datha malunga nomthengi etyhilwayo. Intengiselwano yamkelwe ngenombolo yayo eyahlukileyo, ke akukho namnye kule nkqubo onokufumana ulwazi lwekhadi letyala lomsebenzisi. Ayigcinwanga nakwifowuni yomsebenzisi.
Isipaji sedijithali sisebenza njengommeli phakathi kweyona mali kunye nentengiso. Uninzi lwala maqonga lubonelela ngendlela yentlawulo ekwi-Intanethi ebizwa ngokuba kukuthenga okukodwa, okuthetha ukuba akukho sidingo sokugcwalisa naziphi na iifom kwaye unike naluphi na ulwazi-ukuba nje usetyenziso luvumela intlawulo ye-e-wallet.
Ezinye zezonaipaji zedijithali zaziwayo namhlanje zezi:
Ukubhatalwa okukodwa kwePayPal
Njengoko ubona, ezinye zazo zichazwe yi-OS (nangona uninzi lwazo luzama ukusebenzisa iicrossovers kunye nokusebenzisana), kodwa uninzi lwabantu abazimeleyo Izipaji zedijithali ziyafumaneka kuwo onke amaqonga kwaye ziguquguquka kakhulu. Banikezela ngenkxaso yamakhadi etyala kunye namatyala amaninzi, kunye neentlawulo zevawutsha kunye nenkxaso ye-cryptocurrency.
Nokuba uza kuyakha iapp ukususela ekuqaleni ukuze ihambelane neemfuno zakho kunye neemfuno zobugcisa, okanye usebenzise iqonga le-e-commerce elilungeleyo, ukudityaniswa kwesipaji sedijithali kuyimfuneko. Ukuba usebenzisa iqonga, uninzi lomsebenzi onzima sele wenzelwe wena.
Kuxhomekeke kuhlobo lweshishini lakho kunye nendawo, amaqonga e-commerce aya kukunceda ukhethe ezona zilwanyana zibalaseleyo zeqela lakho ekujoliswe kulo. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuphumeza ezo ntlawulo.
Ukuba ufuna ukwakha ukusuka ekuqaleni, kuya kuba bubulumko ukuqala ngeseti ebanzi yokhetho lwe-e-wallet kwaye ulandele iimetrikhi. Ezinye izipaji zedijithali zinokuba kwimfuno engaphezulu kunezinye, kwaye oku kuxhomekeke ngokubanzi kwindawo okuyo, iimpahla ozithengisayo kunye nobudala babathengi bakho.
Kukho izikhokelo ezininzi apha.
Baphi abathengi bakho? Yonke imimandla inezintandokazi zayo, kwaye kufuneka ube nengqiqo kule nto. Umgaqo wengubo wentengiso kwihlabathi liphela yiPayPal. Kodwa ukuba uyazi ukuba indawo enkulu yentengiso yakho ivela e-China, kuya kufuneka ufake i-AliPay kunye ne-WeChat. Abathengi bomanyano lwaseRussia bakhetha iYandex. IYurophu inesiseko esikhulu somsebenzisi seSkrill, MasterPass kunye neVisa Checkout.
Zeziphi izixhobo ezaziwa kakhulu? Jonga iimethrikhi zakho. Ukuba uninzi lwabathengi bakho basebenzisa i-iOS, kuya kuba bubulumko ukubandakanya iApplePay. Okufanayo kuya kwi-Android Pay kunye ne-Samsung Pay.
Lithini ixesha lokuphila labathengi bakho? Ukuba ujongene ikakhulu nabantu abancinci, kubandakanya iipaji zedijithali ezinje ngeVenmo ngu-ewe onzima. Abantu abaninzi abakwiminyaka yobudala engama-30-50 basebenza kude okanye njengabazimeleyo kwaye baxhomekeke kwiinkonzo ezinje ngeSkrill kunye nePayoneer. Sonke siyazi ukuba i-Millenials ayililo elona gulane liphezulu, kwaye ngokuqinisekileyo baya kukushiya ukuthenga ukuba ababoni ukhetho lwabo oluthandayo lokuhlawula.
Zeziphi iimpahla ozithengisayo? Iintengiso ezahlukeneyo zitsalela iingqondo ezahlukeneyo. Ukuba ukungcakaza yiturf yakho, iWebMoney kunye namaqonga afanayo anika iivawutsha lukhetho olufanelekileyo kuba sele kuthandwa eluntwini. Ukuba uthengisa imidlalo kunye nentengiso yedijithali, cinga ngokumiliselwa kwe-e-wallets exhasa i-cryptocurrensets.
Ukuba awuqinisekanga ukuba uza kuya phi, thetha nabathengi bakho. Wonke umntu uyathanda ukubuzwa uluvo, kwaye ungayiguqula le nto ibe yinzuzo yakho ngokunika uphando olufutshane. Buza abathengi bakho ukuba bangathanda ukubona ntoni kwivenkile yakho. Ungawaphucula njani amava abo okuthenga, kwaye zeziphi iindlela zokuhlawula abaziva bekhululekile ngazo. Oku kuya kukunika isikhokelo esihle sokuphuculwa kwexesha elizayo.
Urhwebo nge-E luyafumaneka kuye wonke umntu. Kwenze ukuthengisa iimpahla kuye wonke umntu kuyo yonke indawo kube lula… Kwaye kunzima kakhulu ngaxeshanye. Inzululwazi kunye neenkcukacha-manani ezisemarikeni eguqukayo akukho lula ukuzibambisa.
Isimo sengqondo somthengi ophakathi sitshintshe kakhulu kule minyaka ili-10 idlulileyo kwaye kufuneka wenze ngokufanelekileyo. Funda kwaye uhlengahlengise, kuba isantya apho umhlaba wedijithali uguqukayo kukucinga kwengqondo.
tags: amazon ahlawuleUkuhlawulwa kwe-androidisikhwama sedijithalie-commercephucula amazinga okuguqulwausetyenziso lweselulasicelo se sithuthiiphulo elihambayozorhweboamaqondo okuguqula iselfowuniIsabelo sentengiso eshukumayoumthengisi oselulaIndawo yeselfowuni vs usetyenziso lweselfowuniinani labathengi abahambahambayo kuthiukuphuma kwevisa
UNina ngumphandi wezobuchwephesha kunye nombhali e UyiloRush, indawo yentengiso ye-B2B edibanisa iimveliso kunye neearhente. Uyakuthanda ukwabelana ngamava akhe kunye nomxholo onentsingiselo ofundisayo kunye nokukhuthaza abantu. Umdla wakhe ophambili uyilo lwewebhu kunye nentengiso. Ngexesha lakhe lasimahla, xa engekho kwikhompyuter, uthanda ukwenza iyoga kunye nokukhwela ibhayisekile.